Tenzi Kush x Chiedza chekuchamhembe | MyWeedSeeds.com
Master Kush x Chiedza chekuchamhembe ndeye F1 mbanje yakayambuka. Kuyambuka kunoguma mune inoshamisa mbanje chirimwa chakasarudzika pungency, kuravira kukuru mabhudzi, uye kugogodza-kunze calyx-kune-mashizha chiyero. Iye mupfupi, akasimba chirimwa (nyore kuita manicure) aine akasimba mabhureki ayo akatakurwa neinonamira resin. Master Kush x Chiedza cheKumaodzanyemba chinogona kurimwa muvhu, hydro, kana greenhouse. Iye anonyanya kufara pasi pechirongwa chakadai segungwa regirini (SOG) nekutarisirwa kwakaringana, anogadzira gohwo rakakura. Simba rake rakayambuka rinomuita iye akanaka, ari nyore-kukura sarudzo kunyangwe iwe uri mutsva kana ane ruzivo murimi. Master Kush x Chiedza chekuchamhembe ichakubata iwe kune yakaoma kunhuhwirira kusanganiswa kweiyo-hash spiciness (kubva kuna Master Kush) uye kutapira (kubva kuNorth Chiedza). Hutsi hwake hwakasimba, asi zvakanaka wakatsetseka. Iwe unozonakidzwa neakanyanya cerebral yakakwira uye zvese-pamusoro, unozorodza muviri buzz.